Maxaa kasoo baxay shirkii golaha ammaanka ee is-mari waaga doorashada Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay shirkii golaha ammaanka ee is-mari waaga doorashada Somalia?
Maxaa kasoo baxay shirkii golaha ammaanka ee is-mari waaga doorashada Somalia?
New York (Caasimada Online) – Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa shir gaar ah ka yeeshay xaaladda adag ee Soomaaliya, gaar ahaan is mari-waaga ka taagan doorashooyinka dalka iyo fashilka ku yimid wada-hadalladii ka socday Teendhada Afisyoone.
Kulankan oo ahaa mid uu albaabada u xirnaa ayaa waxaa marka hore warbixin looga dhageystay ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan, kadib golaha ayaa ka hadlay xaaladaha soo kordhay & khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka.
Ugu horeyn Golaha Ammaanka ayaa shaaciyey in xalka kaliya uu ku jiro in dib loo soo celiyo wada-hadalladii doorashooyinka ee ka socday Afisyoone ee magaalada Muqdisho, balse ma jiro bayaan wadajir oo ay soo saareen 15-ka xubnood ee golaha ammaanka.
“Dariiqa kaliya ee u furan Soomaalida waa in dib loo billaabo wadahadalladii doorashada ee ku saleysanaa heshiiskii 17 September,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ergaga Norway ee Golaha Ammaanka.
Sidoo kale T. S. Tirumurti oo ah safiirka India ee Qaramada Midoobay ayaa dhankiisa qoraal kooban oo uu soo saaray kaga hadlay arrimaha Soomaaliya, isaga oo soo bandhigay illaa afar qodob oo ay ka mid yihiin;
1-In Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleeydu ku laabtaan madasha wadahadalka.
2-in la hirgaliyo heshiiskii 17-kii September iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee Baydhabo.
3-in caqabadaha siyaasaddu ay dhiirragalinayaan Al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah.
4-inay soo dhaweynayaan dadaallada Midowga Africa.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo Soomaaliya ay gashay wejiga kale oo siyaasadeed, kadib markii Golaha Shacabka Soomaaliya uu ansixiyey muddo kordhin labo sano ah, taas oo ay si weyn uga horyimaadeen xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka.
Si kastaba Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa horey u sheegay in aysan taageeri doonin doorasho hal dhinac ah iyo sidoo kale muddo kordhin horleh.